Kana akange asingagoni kuva nevana vake, hapana aigona
Tierra Capri Gobble akatongerwa kufa muAlabama muna 2005 nekuda kwekufa kwemwanakomana wake wemwedzi mina, Phoenix "Cody" Parrish.
Phoenix Cody Parrish akaberekwa musi waAugust 8, 2004, muWest City, Florida. Mumaawa makumi maviri nemaviri ekuzvarwa patsva Cody akabviswa pamusikana waamai vake neFlorida Department of Children and Families. Dhipatimendi racho raimboti Gobble rakarambidzwa nekumusiya mwana wake wekutanga, Jewell, uye rakamubvisa kubva kuna amai vake.
Dare Rinorayirwa kuti "Ramba Uri Kure" Ndakanga ndisina hanya
Jewell naCody vakaiswa nababamunini vaGobble, Edgar Parrish, avo vakabvuma kutora kwenguva pfupi vana. Parrish akabvumawo kuchengetedza vana kure nababa vaGobble naCody, Samuel Hunter. Vose Gobble neHunter vakapiwawo murairo wekudare kuti vasiye kure navana.
Nguva pfupi mushure mekuwana kuchengetedzwa kweCody, Parrish akatamira kuDothan, Alabama. Pakupera kwaOctober 2004, vose Gobble neHunter vakanga vatamira kumusha wefamberi weParrish naye, muvakidzani wake Walter Jordan nevana.
Kufa kweCody Parish
Maererano naGobble, mumangwanani ekutanga aDecember 15, 2004, akanga ane dambudziko rekutora Cody kuenda kunorara nokuti akanga ari "fussin." Pakazosvika 1:00 mangwanani Gobble akaenda kundomudya. Mushure mekunge apedza bhodhoro rake, akamudzosa zvakare muchikwata chake.
Akatarisa zvakare paanenge muna 9: 00 mangwanani uye akamuwana achitamba. Gobble akadzokera kunorara ndokumuka pa11: 00 mangwanani. Paakaenda kuzotarisa Cody akawana kuti akanga asingafemera.
Gobble anonzi Jordani, uyo aivewo muraira mangwanani iwayo. Jorodhani akaenda kundotora Parrish, uyo akanga ari pedyo. Parrish akadzoka kumatarenda uye akafonera telefoni 911. Apo varapi venharaunda vakasvika, Cody akanga asingateereri, uye vakamhanyira kuchipatara cheko.
Kuedza kumudzorera zvakare hakuna kubudirira uye iye akatonzi akafa.
Ikopiyo yakaratidza kuti Cody akafa nekuda kwekushungurudza kwakasimba-simba kumusoro wake. Tsanga rake rakanga ravhunika. Cody aiva nezvimwe zvinokuvadza, kusanganisira mbabvu dzakaputsika, kuputsika kuruvoko rwake rworudyi, kuputika kumapfumo maviri, maitiro akawanda pameso ake, musoro, mutsipa, uye chifuva uye kubvarura mukati memuromo wake zvaienderana nehombodo akafuridzirwa mumuromo make.
Mukuru Tracy McCord weHouston County Sheriff Dhipatimendi akatora Gobble muchitokisi maawa akawanda mushure mokunge Cody aendeswa kuchipatara.
Gobble akaudza McCord kuti akanga ari Cody's main caretaker kunyange zvazvo Parrish aiva mutariri wake uye kuti dzimwe nguva aizomuvhiringidzika paaisazoenda kunorara. Akabvuma kuti angadai akavhuna mbabvu dzake kubva kumubata zvakare zvakasimba.
Gobble zvakare akataura uye kuti apo paakanga akabata Cody iye akazorora pasi muchibvumirano kuti awane bvudzi rake nokukurumidza uye musoro waCody angadaro akarova parutivi rwechifuva panguva iyoyo.
Somugumisiro wezvinyorwa uye mazwi Gobble akaitwa kuMcCord, akanzi ane mhosva yekuuraya .
Vatsigiri vezvematongerwo enyika vakapomera Gobble yekutuka musoro waCody pamusoro pechifuva chake chakaguma nekufa kwake.
Salne, chipatara chiitiko chekukurumidzira uyo akabata Cody kuSouth Alabama Medical Center, akapupura kuti Cody akanga ane marwadzo, kushungurudza, pachiso chake, chifukidzo, uye chifuva-chaizvoizvo kwose kwose. Akapupurira zvakare kuti kukuvadzwa kwakaitwa Cody kunenge kuri kunetsa zvikuru.
Tori Jordani akapupura kuti akanga aziva Gobble kwemakore maviri uye kuti aigara achida Jewell. Akataura kuti Gobble akanga amuudza kuti "kana asingakwanisi kuva nevana vake, hapana aigona."
Munguva yekutongwa Gobble akapupura mukuzvidzivirira kwake uye akaratidza Hunter sechinhu chisina kunaka uye chinotonga. Akataura nezvekuti Hunter aiparadza Cody.
Akapupurira zvakare kuti ndiye ndiye ainyanya kuchengetedza vana kunyange zvazvo akanga ari pasi pedare redare kuti arege kuva pedyo nevana vake. Akataura kuti mazuva mazhinji asati afa, akaona kuti Cody akanga ane marwadzo pamuviri wake, asi haana kuita chero chinhu nokuti akanga achitya.
Gobble akaenderera mberi achipupurira kuti ndiye chete munhu wekubatana naCody kwemaawa gumi pakarepo asati afa. Haana kutora foni 9-1-1 paakaziva kuti akanga asiri kufema nokuti akanga asingadi kupinda mumatambudziko.
Panguva yekupupurirwa kwake, Hurumende yakaunza tsamba yakanyorwa naGobble umo yaakanyora kuti ndiye aive nemhosva yekufa kwaCody. Mutsamba Gobble anonyora, "Ndiyo mhosva yangu iyo mwanakomana wangu akafa asi ini ndanga ndisingarevi kuti zviitike."
Dare rejeri rakapomerwa Gobble rekuuraya guta guru. Nevhoti ye10 kusvika ku2, yakakurudzirwa kuti Gobble atongerwa rufu . Dare reDunhu rakatevera rumbidzo yejeri uye akatongerwa Gobble kuti afe.
Uyewo akatongerwa mhosva:
Samuel David Hunter akateterera mhosva yekuuraya uye akatongerwa kugara mujeri. Akasunungurwa musi waFebruary 25, 2009.
Edgar Parrish akateterera nemhosva yekurwisa kushungurudzwa kwevana uye akabudiswa mujeri musi waNovember 3, 2008.
Mutumbi wePoenix "Cody" Parrish haana kumbobvunzwa kubva kune morgue. Baba vaGobble uye nhanho-amai, vakapupura mumatare kuti mwanasikana wavo aiva amai vane rudo, havana kumboratidza kuti vanoviga mwana, uye hapana mumwe wehama.
Boka revagari vehupfumi muDothan rakanzwa sokunge mwana, uyo akanga atsungirira kushungurudzwa kubva panguva yaakaberekerwa, akanga achingosiyiwa kunze. Chikwata chakanga chagadzirirwa uye mari yakakwana yakasimudzirwa kutenga zvigadziro zvekuviga Cody mukati, pamwe nekatekete uye nzvimbo yekuvigwa.
Musi waDecember 23, 2004, Cody Parrish akavigwa nehanya, kuchema, vatorwa.
Anouraya Somer Thompson
Mune Miedzo Miedzo uye Dare Dare
Mazano Anobva kuMudzidzisi WeVadzidzi Vakakura
The Definition of Dialectology
Edzai Kuziva Mafungiro Okutanga Anotsanangurwa
Zvipfuti uye Kusungwa Simba reUnited States Federal
8 Zviitiko Zvikuru muEuropean History
Tashliki, Mutambo Wekutanga weRosh HaShanah
Shona Dante's Divine Comedy: Inferno: Canto III
Nzira Yokugadzirisa "Shandisa" (Kupa Purogiramu) muchiFrench
Florida Atlantic University (FAU) Kubvuma
Kubudirira uye Kukundikana Kwekutuka muCold War
Conjugation ya 'Jugar'
Mepu yeTectonic Plates neMiganhu Yadzo
A List of 9 Inspirational Magazines for Artists
20 Vanhu Avo Vakadzora Kudzokorora Vana Vadzo Mifananidzo
Nzira Yokuva Mudzidzisi
Chii Chinoitika Kana Pane Chimwe Chisungo muChisarudzo Chikoro?
Imba Yemavara Akarongedza - Muongorori Wekukurukurirana Kukuru
Kuuraya A Mockingbird
Tarot Card Inopararira